Dowladda Soomaaliya oo ku eedeysay Eritrea inay Xarrakatul Shabaab ku taageerto dhaqaale, hub iyo tababar | raascasayrmedia.com
← Gabyaa Carabka laga Jaray oo lagu eedeeyay inuu amaani-jiray Madaxweynaha talada ku ciirsan-tahay ee Yemen Cali cabdala Saalax
Soomaali badan oo ku dhintay Libya →
May 7, 2011 · 1:44 pm
Dowladda Soomaaliya oo ku eedeysay Eritrea inay Xarrakatul Shabaab ku taageerto dhaqaale, hub iyo tababar
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay xukuumadda Eritrea inay Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin ay ku taageerto hub, dhaqaale iyo inay u tababarto ciidamada, sida uu safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya danjire Siciid Yuusuf Nuur uu u sheegay shabakadda WIC oo taageeta xukuumadda Itoobiya.
“Xukuumadda Eritrea weli ma joojin dhiirrigelinta iyo taageerada ay siiso kooxda Al-shabaab, tan iyo markii ay Qarammada Midoobay saartay cunno qabateynta, sido kale madaxweynaha Eritrea Issias Efewerqi wuxuu ka shaqeynayaa hurinta colaadda Soomaaliya,” ayuu yiri dajire Nuur.
Dajiruhu wuxuu sheegay in Xarrakada Al-shabaab aysan sii wadi karin dagaalka ay kula jirto dowladda KMG ah haddii aysan taageero ka helayn dowladda Eritrea oo uu sheegay inaysan doonayn nabad ka dhalata Soomaaliya.
Sidoo kale, danjire Nuur wuxuu ugu baaqay urur goboleedka IGAD, ururka Midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee Qarammada Midoobay inay ka hortagaan kaalmada ay Eritrea siinayso xoogagga Islaamiyiinta ah ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya.
Dajiruhu wuxuu soo dhaweeyay geerida hoggaamiyihii Al-Qaacida Usama Bin Laden oo ciidamada Mareykanku ay todobaad ka hor ku dileen dalka Bakistaan.
“Geerida Usaama Bin Laden waa mid dhaawacaysa Xarrakada Al-shabaab oo ah garab Al-Qaacida wakiil uga ah geeska Afrika,” ayuu yiri safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya. Isagoo sheegay in geerida Bin Laden ay sababayso nabad ka dhalata dunida oo dhan, gaar ahaan bariga Afrika.
“Dowladda KMG ah ee Soomaaliya hadda waxay ka talisaa 90% Muqdisho oo ah xarunta dalka Soomaaliya taasna waa guul, ayuu hadalkiisa raaciyay dajire Nuur oo intaas ku daray in dalalka Itoobiya iyo Uganda ay gacan ka geystaan sidiay DKMG ah dib ugu qabsan lahayd qaybo ka mid ah Soomaaliya.
Ugu dambeyn, safiirku wuxuu ugu baaqay beesha caalamka iyo hay’adaha gargaarka inay kaalmeeyaan in ka badan saddex milyan oo Soomaali ah oo gargaar deg-deg ah u baahan. Isagoo sidoo kale ugu baaqay beesha caalamka inay culeys ku saaraan Xarrakada Al-shabaab inay dagaallada joogiso.
Dowladda Ertrea ayaan weli ka jawaabin eedeyntan ay u jeedisay dowladda KMG ah ee Soomaaliya, iyadoo madaxweynahooda Issias Efewerqi uu dhawaan sheegay inuu taageersan yahay dadaallada ay dalalka carabta ku taageerayaan DKMG ah si ay u soo celiso ammaanka Soomaaliya.